Weeraro Ka Kala Dhacay Degmooyinka Hodan Iyo Hilwaa. – Calamada.com
Weeraro Ka Kala Dhacay Degmooyinka Hodan Iyo Hilwaa.
Saacadihii lasoo dhaafay waxaa weeraro loo adeegsaday bambaanada nooca gacanta laga tuura lagu weeraray isbaarooyin maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka ay dhigteen xaafado ka tirsan degmooyinka Hodan iyo Hilwaa ee magaalada Muqdisho.
Bamka kowaad ayaa lagu dhuftay goob isbaaro u ah maleeshiyaatka dowlada oo ku taala qeybo ka mid ah xaafada Al-baraka ee degmada Hodan’iyadoona bamka bartamaha uu ka galay goob maleeshiyaatka dowlada Ridada ay ku qayilayeen.
Inta la xaqiijiyay qaraxa waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday ku dhawaad 5 ka tirsan maleeshiyaatka dowlada’iyadoona qaraxa kadib maleeeshiyaatka Garguurte ay fureen rasaas fara badan.
Weerarka labaad oo ah bam gacmeed ayaa sidoo kale lagu tuuray goob maleeshiyaatka Ridada ku qayilayeen oo ah isbaarada Biyo dega xaafada Suuqa xoolaha ee degmada Hilwaa’iyadoona la xaqiijiyay inuu jira khasaara nafeet oo maleeshiyaatka dowlada federaalka kasoo gaartay weerarkaasi.
Maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka ayaa qaraxa kadib furay rasaas fara badan taasi oo sababtay dhaawaca saddex ruux oo shacab ah kuwaasi oo dhaawacyadooda la dhigay isbitaalada Muqdisho.
Weeraradan Bambaana ayaa kusoo aadaya xilli uu sii kordhaya khasaaraha dowlada Federaalka kasoo gaartay qaraxii saacadihii lasoo dhaafay lala beegsaday maqaaxi ay ka cunteeyaan saraakiisha nabadsugida oo ku taala agagaarka xarunta Habar Khadiija ee degmada Shibis.
Previous: Dhageyso Warka Duhur Ee Andalus 03-07-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm Ee Andalus 03-07-1437 Hijri.